काठमाडौंमा ४.८ रेक्टर स्केल भूकम्पको धक्का
काठमाडौँ । राजधानीमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । बिहीबार बेलुका ७ बजेर ११ मिनेट जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु बनाइ ४.८ रेक्टर स्केलको धक्का महसुस भएको हो ।
याे पनि पढ्नुहाेस् - वकिलहरुले डाक्टरसँग बदला लिन अस्पताल तोडफोड, एक बिरामीको मृत्यु
पाकिस्तानमा डाक्टरको कुटाइको बदलामा वकिलहरुको एक समूहले अस्पताल तोडफोड गरेको छ । लाहोरस्थित एक अस्पतालका डाक्टरले आफ्ना साथीलाई कुटेको भन्दै बदलाको रुपमा वकिलहरुले अस्पताल तोडफोड गरेका हुन् । उनीहरुको आक्रमणले गर्दा अस्पतालका बिरामीको मृत्यु भएको छ । उनीहरुले लाहोरको पन्जाब इन्स्टिच्युट अफ कार्डिओलोजीमा छिरेर तोडफोड गरेका हुन् । यससँगै उनीहरुले विरोध स्वरुप सवारी साधनमा आगजनी समेत गरेका थिए । डन न्युजका अनुसार बुधबारको यस घटनापछि प्रहरीले ४० जना वकिललाई पक्राउ गरेको छ । साथै घटनाको छानविन गर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
याे पनिल पढ्नुहाेस् - नागरिकता संशोधन'पछि भारतमा आन्दोलन : नेपाललाई समेत धक्का ?
नयाँदिल्ली : भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएपछि विपक्षी दल लगायत विभिन्न समूहहरु आन्दोतिल बनेका छन् । खासगरी मुस्लिम समुदायले विधेयकको विरोध गर्दैआएको छ । विद्यार्थी, नागरिक अगुवा पनि प्रदर्शनमा भाग लिएका छन् । उक्त विधेयक राज्यसभाबाट पारित भएपछि आन्दोलन झन् चर्किएको हो । कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनकारीले ढुंगामुडा प्रहार गर्दै टायर बालेका छन् । प्रहरीसँग झडप हुँदा दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते छन् । आसामका गुहावटी लगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन व्यापक भएको छ । हजारौंको प्रदर्शन दबाउन सरकारले सेना परिचालन समेत गरेको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन् । हुवाहटी र दिब्रुगाह्रमा त आन्दोलनका कारण सवारी साधन ठप्प हुनुका साथै उडान समेत अवरुद्ध भएका छन् । पछिल्लो समय आसामको गुवाहटी लगायत सहरमा सरकारले सेना परिचालन गरेको छ । भारतीय सञ्चार संस्था पिटिआइका अनुसार गुवाहटी, तिनसुकिया, दिब्रुगाह्र र जोरहाट जिल्लामा पनि सेना परिचालन गर्दै कर्फ्यू लगाइएको छ । आसामका १० जिल्लामा कर्फ्यूका साथै इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो । आसामका मुख्यमन्त्रीको निवासमै प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेको भन्दै कर्फ्यू अनिश्चितकालीन रुपमा लम्ब्याइएको छ । प्रदर्शनका कारण मुख्यमन्त्री सर्वमण्यम सोनवल र प्रदेशमन्त्री रामेश्वर तेलीको सवारीमा समेत केही बेर अवरोध सिर्जना भएको थियो ।लेखिनगर क्षेत्रस्थित सोनवलको घरमै प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गरेको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन् । दुलियाजनस्थित रामेश्वर तेलीको निवासमा पनि ढुंगा प्रहार गरी भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याइएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने आसामका जनतालाई नागरिकता विधेयकले कुनै असर नगर्ने भन्दै उनीहरु यसबारे चिन्तित बन्नु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘तपाईँहरुको अधिकार कसैले पनि खोस्न नक्दैन’ प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन् । गुहावटीमा त दशौं हजारको संख्यामा स्थानीय बासिन्दाहरु कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । भारत सरकारले लोकसभा हुँदै राज्यसभाबाट समेत नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेपछि आन्दोलन चर्किएको हो । विधेयकमा छिमेकी मुलुकबाट आउने धार्मिक शरणार्थीहरुलाई भारतीय नागरिकता दिने उल्लेख छ । तर मुस्लिम धर्म बाहेकका धर्मलाई मात्रै यस्तो अधिकार दिइएपछि मुस्लिम समुदाय आन्दोलित बनेका हुन् । केही मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले लोकसभामै विधेयक च्यातिदिएका थिए । राज्यसभामा उक्त विधेयक १ सय २५ मत सहित पारित भएको हो । कतिपय अगुवाले विधेयकका कारण ‘भारत मुस्लिमका लागि बस्न नसकिने मुलुक’ हुने भन्दै व्याख्या गरेका छन् । उनीहरुमध्ये धेरैले विधेयककै कारण भारत धार्मिक रुपमा ‘विभाजनतिर गएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधेयकलाई गृहमन्त्री तथा भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले ‘३४ वर्ष पुरानो गलत इतिहास’ सच्याउन थालेको भन्दै बचाउ गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा बंगलादेशबाट मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्या शरणार्थीहरु भित्रिने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न यस्तो विधेयकको साहरा लिइएको पनि बताइन्छ ।
नेपाललाई पनि धक्का ?
भारतमा रहेका नेपालीभाषी समुदायले पनि विधेयकमा विरोध जनाएका छन् । आसाममा भएका प्रदर्शनमा नेपालीभाषीहरु पनि सहभागी भएको बिबिसीले जनाएको छ । आसाम गोरखा सम्मेलनका सभापति रामप्रसाद शर्माको हवाला दिँदै बिबिसीले यहाँका नेपालीभाषी आन्दोलनमा सामेल रहेको जनाएको छ । भारत सरकारले पछिल्लो पटक तथ्यांक निकालेको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टरमा एक लाख जति नेपालीभाषीको नाम छुटाइएको थियो । सोही कारण पनि उनीहरु आन्दोलित बनेको स्थानीय मिडियाको टिप्पणी छ । गोरखाल्याण्डका अगुवाहरु केन्द्र सरकार आफूहरुप्रति अनुदार बन्दैआएको बताउँछन् । नेपालीभाषीलाई भाजपा सरकारले दमन गर्दैआएको र अधिकार कुण्ठित गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
त्रिबि तोडफोड : नेविसंघका ७ जना पक्राउ,अनेरास्ववियूले दियो यस्ताे कडा ‘दनक’
कोरोनाबारे अपडेट दिने प्रवक्ता गौतमले नै पत्रकार सम्मेलनमा नाक कोट्याएपछि
प्रधानसेनापतिको म्याद थपिने सम्भावना
डिआइजी सिंहको जागिर धरापमा
युट्युबको कमेन्टमा चर्चित ‘विनोद’ को हुन् ?
शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द
फेसबुकको नक्कली आइडीबाट दुःख दिन थालेपछि हत्या गरे
बझाङकाे सेती नदीमा हाम फालेर एक जना बेपत्ता
कोरोनाले खुम्चियो पर्यटन बोर्डको बजेट
नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या २३ हजार ९४८ पुग्यो